I-Kuwait Airways: Ukwandiswa kweFleet ngokuthenga ii-A330neo ezisibhozo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » I-Kuwait Airways: Ukwandiswa kweFleet ngokuthenga ii-A330neo ezisibhozo
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeKuwait Breaking • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Kuwait Airways, umphathi wesizwe wase-Kuwait, utyikitye isiVumelwano sokuThenga (PA) ngeenqwelomoya ezisibhozo ze-A330-800. Isivumelwano sasayinwa ngu-Yousef Al-Jassim, uSihlalo wee-Airways ze-Kuwait kunye noChristian Scherer, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kwi-Airbus, kwikomkhulu le-Airbus eToulouse.
U-Yousef Al-Jassim, uSihlalo we-Kuwait Airways uthe: “I-A330-800 iyakufaneleka ngokungafanelekanga kwizicwangciso zethu zokukhulisa nokukhula. Uqoqosho lwayo olungathethekiyo lokusebenza kunye nokusebenza ukongeza kwezona zihamba kakuhle kubakhweli beklasi kuyenza ukuba ibe lulondolozo oluvakalayo. Siqinisekile ukuba i-A330-800 iyakusixhasa ukuba sikhuphisane ngokukuko kuthungelwano lwendlela yethu eyandayo. Ubudlelwane bethu neAirbus bungaphaya kokufunyanwa kweenqwelomoya kwaye sijonge phambili ekuqhubekeni nentsebenziswano kwicandelo lobugcisa. ”
Isibhengezo siphawula inyathelo elibalulekileyo kuhlaziyo lwenqanawa ye-Kuwait Airways kunye nokwandiswa kwesicwangciso. Umphathi wesizwe we-Kuwait une-A350 XWB kunye neenqwelo moya zoSapho ze-A320neo ngokulandelelana. Ukuhanjiswa kweenqwelo moya ezintsha ze-Airbus kuza kuqala ngo-2019.
“Kuyasivuyisa ukuba iKuwait Airways ikhethe iA330neo njengelitye lembombo kwizithuthi zayo zexesha elizayo. I-A330-800 ngobuchule bayo obugqwesileyo kunye nokwenza izinto ngendlela eyahlukileyo iyakuxhasa umnqweno womntu ophetheyo wokuphuhlisa uthungelwano olwandisiweyo lokuhamba ixesha elide, utshilo uChristian Scherer, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kwi-Airbus. "Inqwelomoya izakugcwalisa ngaphandle komthungo iA Kuwait Airways 'A320neos kunye neA350 XWBs kwaye ihambise uqoqosho lokusebenza olungenakoyiswa, ukusebenza ngokugqibeleleyo kunye namava abakhweli angenakuthelekiswa nanto."
Yaziswa ngoJulayi 2014, usapho olungu-A330neo sisizukulwana esitsha esingu-A330, esineenguqulelo ezimbini: i-A330-800 kunye ne-A330-900 ekwabelwana ngayo ngepesenti ezingama-99. Yakha kuqoqosho oluqinisekisiweyo, ukuguquguquka kunye nokuthembeka koSapho lwe-A330, ngelixa kuncitshiswa ukusetyenziswa kwepetroli malunga neepesenti ezingama-25 kwisihlalo ngasinye xa kuthelekiswa nabakhuphiswano besizukulwana sangaphambili kunye nokwanda kwebala ukuya kuthi ga kwi-1,500 nm xa kuthelekiswa noninzi lwe-A330s esebenzayo. I-A330neo ixhotyiswe ziinjini zeTrent 7000 zeRoll-Royce kunye nephiko elitsha elinokwanda kwesithuba kunye ne-A350 XWB-Sharklets. Ndlwana inika intuthuzelo yezibonelelo zomoya omtsha.
I-A330 yenye yeentsapho ezithandwa kakhulu kubantu ngokubanzi, ifumene ii-odolo ezingaphezu kwe-1,700 ezivela kubathengi abangama-120. Ngaphezulu kwe-1,400 A330s zibhabha ngaphezulu kwe-120 zabaqhubi kwihlabathi liphela. I-A330neo lulongezo lwamva nje kusapho oluphambili lwe-Airbus widebody, ekwabandakanya i-A350 XWB kunye ne-A380, zonke zinendawo engenakuthelekiswa nanto kunye nentuthuzelo edityaniswe namanqanaba okusebenza angazange abonwe ngaphambili kunye nobuchule obungenakuthelekiswa nanto.